Uncategorized Archive - ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်ခြင်းသတ္တုသိုလှောင်ပစ္စည်းသတ္တုကွန်တိန်နာ,ပုံဖမ်းတွန်းလှည်း,Pallet,ထိန်သိမ်း,roll ကွန်တိန်နာ etc
2021 Yougu သိုလှောင်ရေးပစ္စည်းကိရိယာ download ကို catalog : yougu storage equipment catalog 2021 new
1. Foldable metal cage, သိပ္ပံနည်းကျနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဒီဇိုင်း, လူအင်အားစစ်ဆင်ရေးကုန်ကျစရိတ် minimize နှင့်စစ်ဆင်ရေးဘေးကင်းလုံခြုံမှုမြှင့်တင်ရန်; ခေါက်နိုင်သောဖွဲ့စည်းပုံ, လစ်လပ်၏အနိမ့်ပြန်လာကုန်ကျစရိတ်; 2. အဆိုပါ pallet အင်ဂျင်နီယာဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်, အားလုံးအစိတ်အပိုင်းများကိုတိကျမှိုအားဖြင့်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်, အဆိုပါသတ်မှတ်ချက်များစုစည်းဖြစ်ကြသည်, နှင့် 1mm ၏သည်းခံစိတ်ထိန်းသိမ်းထားသည်; all the parts that are easily damaged and consumable are all…
1. မိုဘိုင်းစင် (ထိန်သိမ်း stacking) မိုဘိုင်းစင် (ထိန်သိမ်း stacking) products are divided into two types: fixed and detachable. They have uniform specifications, fixed capacity, do not require shelf equipment, and can stack each other, thereby formingathree-dimensional storage capacity and realizing multiple stacking of goods. Make full use of space, simple structure, good load-carrying performance, convenient use, safe and…
Foshan Yougu သိုလှောင်ပစ္စည်း Co. ,, Ltd specialized in design and manufacturing all kinds of metal warehouse logistic storage containers, လှောငျအိမျ, pallet, ပုံဖမ်းတွန်းလှည်း, ထိန်သိမ်း stacking, pallet, etc which is totally storage solution provider. This is our latest product, storage iron frame, use to place products in the warehouse. If you are interested in our products, you can contact us to inquire about…
တစ်ဦးပုံဖမ်းတွန်းလှည်းပြီးတော့အဘယျသို့ယဒါဟာ Do ဆိုတာဘာလဲ?
လက်ကိုင်ကားသည်လူစီးအားဖြင့်တွန်း။ ဆွဲတင်သောသယ်ဆောင်သည့်ယာဉ်ဖြစ်သည်. ၎င်းသည်ယာဉ်အားလုံး၏ဘိုးဘေးဖြစ်သည်. ပုံဖမ်းတွန်းလှည်းများအတွက်ပစ္စည်းကိုင်တွယ်နည်းပညာ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိနေသော်လည်း, ပုံဖမ်းတွန်းလှည်းများသည်ယနေ့တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိုင်တွယ်ရေးကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်. The trolley is widely used in production and life because it has low cost, ရိုးရှင်းသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, အဆင်ပြေသောစစ်ဆင်ရေး, light…
ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, you must choose according to the shelf display area. If it isafresh supermarket shelf placed in the middle area, you can chooseadouble-sided structure shelf for products such as fruits and vegetables. No matter what angle the customer walks through, he can see the products on the fresh shelves, which can formagreater…
မည်သို့ရန်အသုံးပြုခြင်းသတ္တု Pallets လျော်စင်ပေါ်အတူ?
စာမျက်နှာ 1 ၏ 512345»